Maxay tahay sababta ay taageerayaasha kooxda Real Madrid ku naceen Zidane, kaddib soo laabashadiisa?? – Gool FM
Maxay tahay sababta ay taageerayaasha kooxda Real Madrid ku naceen Zidane, kaddib soo laabashadiisa??
(Madrid) 13 Sebt 2019. Zinedine Zidane ayaa ku guuldareystay inuu dhiso koox aad u adag oo ay jamaahiirta Los Blancos ku qancaan tan iyo dib ugu soo labashadiisa garoonka Santiago Bernabéu.
Macalinka reer France ayaa laga war qabaa in marba marka kasii danbeesa uu sii luminayo raali ahaanshiyaha madaxweynaha kooxda Real Madrid iyo taageerayaashaba, tan iyo markii uu ku soo laabtay kooxda ka dhisan caasimada Madrid ee dalka Spain.
Zinedine Zidane ayaa balan ku qaaday inu Koox adag lasoo shirtagayo, isla markaana kacaan cusubna uu bilaabayo, lakiin kooxda Real Madrid ayaa durbadiiba la kulantay qasaarooyin io niyad jab is daba jog ah.
Mid kamid ah tageerayasha kooxda Real Madrid oo hadlay ayaa yiri:
“Zidane ma ahan Zidan-kii hore, isku midna ma noqon karaan marnaba, qof walba oo kamid aha tageerayasha kooxda Real Madrid wuxu daremayaa jahwareer badan”.
Qasaaraha ugu badan zidane ayaa wexey kaga timid suuqa kala iibsiga isagoo 6 ciyaryahan laso saxiixday kuna bixiyay lacag dhan 300 million oo euro, iyagoona wili so bandhigin qaab ciyareed cajiib ah waxayna kala yihiin xidigahas, Hazard, Militão, Mendy, Areola, Jovic, Rodrigo.
Kaliya waxaa adag in su’aal la galiyo awooda ciyaareed ee xiddighii hore kooxda Chelsea haatana ka tirsan Real Madrid ee Eden Hazard.
Zidane ayaa suuqii dhawaa ee xagaaga si xoogan kaga doonayay adeega laacibka ay isku wadanka kasoo wada jeedaan ee u ciyaara kooxda Manchester United Paul Pogba, inkastoo Red Devils ay ku madax adeegtay in xiddigeedan ay ka fasaxdo garoonka Old Trafford.
Dhinaca kale macalinka reer France ee Zinedine Zidane ayaa si aad ah u doorbidayay inuu iska iibiyo laacibka reer Weles ee Gareth Bale, inkastoo ugu dambeyntii uu ku fashilmay talaabadaas.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Real Madrid ayaa kulamadii ugu danbeeyay ku ciyaartay taatikooyin ama shaxo kala duwan, taasoo dhibaato u keentay is fahanka ciyartoyda marka lagu jiro gudi jiro garoonka, wuxuuna ku ciyaaray kulamadii lasoo dhaafay 17 ciyaartoy ee kala duwan.
Dani Carvajal ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Durbadiiba taageerayaasha waxay bilabeen wal-wal ku aadan natiijooyinka aan kala kulmeyno kooxaha kale, balse kooxda waxay sameyneysaa soo kabasho fiican”
“Waxaan rajeeneynaa in xidigaha cusub ee suuqan xagaaga yimid kooxda ay si weyn inoo caawin doonaan”.
Si kastaba ha ahaatee, tageerayaasha Real Madrid kuma qanacsana qaab ciyaaredka kooxdooda, xili horyaalka uu wali bilow yahay.
Macalinka reer Talyaani ee Massimiliano Allegri ayaa sheegay inuusan marna ka qoomameynin ka tagista kooxda Juventus.
Tababaraha ku guulestay abaal-marinta macallinka bisha Agoosto ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey